Maninona No Ny 12 Oktobra Andro Nahitàna An’i Amerika No Ankalazàn’i Espaina Ny “Fetim-pireneny”? · Global Voices teny Malagasy
Maninona No Ny 12 Oktobra Andro Nahitàna An'i Amerika No Ankalazàn'i Espaina Ny “Fetim-pireneny”?
MpanoratraMaria Luz Moraleda
Nandika (fr) i Maéva Rose
Voadika ny 25 Oktobra 2015 4:16 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, Italiano, русский, 繁體中文, Español
Any Arzantina, andro ofisialy ho an'ny “fifangaroanà kolontsaina marolafy” ny 12 Oktobra. Sary ampiasàna ny lisansa CC.
Rehefa anontaniana ireo Espaniola ny fiavian-dry zareo, vitsy ireo milaza hoe “Espaniola”. Ery rehefa miteny ry zareo hoe avy any Espaina, dia tsy maintsy manaraka ho azy eo ny faritra niaviany : « andalou, manchega, valence, catalonia, canarie, asturie ».
Mahazendana ireo Latino-Amerikana maro izany. Tsy miely manerana an'i Espaina ilay fireharehana amin'ny firenen'ny tena, izay misy any amin'ireo firenena marobe ao Amerika Latina. Araka ny angon-drakitra avy amin'ilay fanadihadiana « Ny Fiarovam-pirenana sy ny Tafika Mitam-piadiana » vita tamin'ny 2013, nataon'ny Foibem-Pikarohana Sosiolojika (CIS), Espaniola iray amin'ny dimy no zara fa, na tsy mahatsiaro mihitsy ho tena afapo amin'ny maha-izy azy ny fireneny. Nitombo mihitsy aza io tsy fisian'ny toepo tia ny tanindrazana io: avy any amin'ny 12 isanjato tamin'ny 2005, lasa 22 isanjato ny 2013, efa ho indroa avo heny.
Tsy niala tamin'ilay hoe “firenena reny” na fanjakana iray i Espaina mba ho lasa firenena araka izay ahafantarantsika azy ankehitriny. Ary ny fanjanahan'ny frantsay sy ny « ady ho an'ny fahaleovantena » (1808-1814) nanaraka azy dia tsy tafiditra akory ao anatin'ny zavatra saintsainin'ireo Espaniola amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay, io toepo tia ny tanindrazana io sy ny fironana mankany amin'ireo marika mifandray aminy no fitaovana fahiny nampiasan'ny ‘franquisme’ – izay ny teny fanevany dia ny hoe : « Iray, lehibe ary afaka ! ». Ny jadon'i Francisco Franco [rohy amin'ny teny frantsay] dia mandràra ny fampiasàna teny hafa ankoatry ny ‘castillan’, ireo teny izay samy miaraka ho ofisialy ho an'ny sasany : ny catalan, le galicien, ny euskera [basque] ary valencien.
Hatraiza moa izany no ho fisoloan-toeran'ny toepo demaokratika tia tanindrazana espaniola ny ‘national-catholisisme franquiste’ ? Ny bokin'i Jordi Muñoz Mendoza « Ny fanorenana ara-politika ny maha-izy azy ny espaniola. Miainga avy amin'ny ‘national-catholicisme’ mankany amin'ny ‘fitiavan-tanindrazana demaokratika’ ? » [amin'ny teny espaniola] no manome tondro mba hanakarana ny fototra sosialy sy ideolojikan'ny maha-izy azy ny espaniola amin'izao fotoana izao.
Araka izany, nahoana no ankalazaina ao Espaina ny 12 Oktobra?
Na ny anaran'ilay fety rehefa 12 Oktobra aza dia nisy fiovàna « fanatsaratsaràna endrika» nandritry ny tantara. Tamin'ny 1913, ilay minisitra teo aloha lasa filohan'ny Firaisan'ireo ibéro-amerikàna, Faustino Rodríguez, no namorona ny « Andron'ny foko » (12 Oktobra) « mba hampiraisana ireo Latino-Amerikàna sy ny Espaniola. » Tamin'ny 1931, Ramiro de Maeztu, mpanoratra, izay ny fianakaviany dia mpandraharaha tao Kiobà, nangataka mba hanaovana ny anaran'izy io ho « Andron'ny teny sy fomba espaniola. » Kanefa, tsy tena nihatra io hevitra io raha tsy taorian'ny didim-panjakana amin'ny 1958, tao anatin'ny fitondrana franquiste indrindra tamin'izay.
Noho ny fiantraikany sy ny fihevitra miiba momba ny fahatongavan'ireo ‘conquistadores’ espaniola tao amin'ny tanibe amerikàna, nosoloin'ny governemanta demaokratikan'i Felipe González ny anarany « Andron'ny teny sy fomba espaniola » ho lasa « Andron'ny fetim-pirenena » tamin'ny 1987
Izahay, mpiteny espaniola, dia mahafantatra fa io andro io i Christophe Colomb no tonga tao amin'ny nosy Bahamas ary « nahita voalohany» an'i Amerika. Marobe ireo boky fianarana tantara no mitantara hatrany ny dian'io Italiana io nankany amin'ny « Tontolo Vaovao » izay ny Fanjakana Espaniola tamin'izany fotoana izany no namatsy vola azy.
Fa ndeha isika hiverina amin'ny 2015, tamin'ny alàlan'ny fanentanana nataon'ny Minisitry ny Fiarovana, nantsoin'ny governemanta hoe « Andron'ny rehetra » ny 12 Oktobra.
Tsy isalasalàna, fa filazàna ankolaka mazava tsara ny filàna mampiditra ireo izay tsy mahatsiaro ho ao anatin'ny fomba fijery ny hoe Espaina io, tsy ela fa tonga dia taorian'ny vokatr'ireo fifidianana tao Katalonia izay ny mpitaky fizakantena no nahazo ny toerana betsaka indrindra ao amin'ny parlemanta Katalàna.
Ahitàna matso miaramila io andro fankalazàna io, matso kianina ho nandanian'ny fanjakana 800.000 Euro. Ireo mpandray anjara amin'izany dia tsy iza fa ny mpanjaka vaovaon'i Espaina sy ireo andrim-panjakana ara-politika.
Venezoeliana iray namana no nanontany ahy ny antony ifidianan'ny firenena iray, ao anatin'ity tranga ity, hankalaza ny « fetim-pireneny » amin'ny andro « nahitàna voalohany » an'i Amerika.
La Casa Real d'Espagne manamarina azy toy izao :
Ny tanjona farany ho an'ny fankalazàna Fetim-pirenena dia ny famelomana tsy ho faty ireo fotoana tao anaty tantara iraisana, izay tafiditra ho isan'ny lova ara-tantara, kolontsaina ary ara-piarahamonina itambarambe, raisin'ny ankamaroan'ny olompirenena araka izay maha-izy azy izay. Araka ny lalàna 18/1987, tamin'ny 7 Oktobra, izay mametraka ny andro fankalazana ny fetimpirenena ao Espaina ho ny 12 Oktobra, [io andro io] manamarka ny andro manan-tantara nahavitan'i Espaina nanatratra ny teboky ny dingana fanorenana Firenena miainga avy amin'ny hamaroantsika ara-kolontsaina sy politika, ary ny fidiran'ireo Mpanjakan'i Espaina ho ao anatin'ny Fanjakan'olon-tokana iray ihany, manomboka vainm-potoana iray efa ibanjinana sahady ny fandefasana ny teny sy ny kolontsaina hiampita lavitra ny sisintany eoropeana.
Kanefa, eny anjoron'ireo fihaonana diplaomatika sy fenitra amin'ny andrim-panjakana, tsy misy, na zara raha misy avy amin'io «fihaonana tamin'i Amerika» io any anatin'ireo hetsika ataon'ny olompirenena mandritra io andro tsy fiasàna io.
Raha tiantsika ny hijery io andro io amin'ny endriny rehetra tena maha-be fanantenana, hoe «fandefasana ny teny sy kolontsaina» ivelan'i Eoropa, nahoana no tsy misy olona mba manao izay hampiasàna io andro io hanaovana hetsika mampiseho ny tena fifanakalozana misy eo amin'ireo olompirenena miisa 350 tapitrisa mifampizara io fiteny io ?
Any anaty tambajotra sosialy, mivandravandra be ny fisian'ny tendro roa mifanohitra. Ny tenifototra #eldiadetodos [andron'ny rehetra] no manohitra ny #nadaquecelebrar [tsy misy tokony hankalazaina]. 52,8 isanjato amin'ireo Espaniola 2477 nanontanian'ny CIS tamin'ny 2010 no nampifandray ny teny « fitiavana ny tanindrazana» amin'ny maha « avy amin'ny elatra havanana azy». Ary, satria izany dia mitranga ao anaty firenena iray izay, raha toy ny misy ao Alemaina, niaina ny fasisma, mitohy ampifandraisina aminà fironana nasionalista avy amin'ny elatra havanana ny manangana ny saina, na mitondra izany eny amin'ny akanjo tinafy, na amin'ilay fitaovana kely fitondràna fanalahidy na ny fiaran'ny tena. Ny tarika Espaniola mpilalao baolina kitra sy ny amboarany azony tamin'ny Fiadiana ny ho Tompondaka Erantany ary ny Tompondakan'ny Eoropa tsy ela akory izay no mba hany nahavita nanainga Espaniola marobe hanapaka hevitra hanandratra vonjimaika ny sainam-pireneny.
Ramatoa Ada Colau, Ben'ny tanànan'i Barcelona, ary ny an'i Cádiz, José María González, tsy nanisy fisalasalàna mihitsy momba ny toerana raisin-dry zareo :
— Ada Colau (@AdaColau) 12 Octobre 2015
Henatra ho an'ity Firenena ity izay mankalaza ny famonoana mpiray tanidrazana, ary ambonin'izany rehetra izany, miaraka aminà matso iray mitentina 800.000 Euro!
— José María González (@JM_Kichi) 12 Octobre 2015
Tsy isika velively no nahita voalohany an'i Amerika, tamin'ny anaran'Andriamanitra dia namono sy nampanaiky kaontinanta iray isika, miaraka amin'ny kolontsainy. Tsy misy tokony ho ankalazaina.
« Mino an'i Amerika Latina sy ireo Latino-Amerikàna aho. Ny Andron'ny teny sy fomba espaniola, ireo mpandàla espaniola any Eoropa, mitambatra, tsipiho tsara izay maha-isika antsika sy izay tokony haloantsika amin'ireo any Amerika. Tonga izao ny fotoana tokony hisaorana an-dry zareo momba izany », hoy ny fanambaràn'ny filoha Espaniola, Mariano Rajoy, tao anaty lahatsoratra iray ao amin'ny El País. Pi-maso alefa ho an'ireo latino mpifidy izay ao anaty fampielezankevitra tanteraka ho amin'ny fifidianana solombavambahoaka hatao amin'ny 20 Desambra ve?
Shily 2 ora izay